I-condo epholileyo kumbindi wedolophu (Avida Aspira) WIFI+cable
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMadel
Indawo kaJHan @ Avida Aspira, Tower 1. Indawo ekhuselekileyo, ekhululekile kwaye efikeleleke kakhulu yokuhlala. Indawo efana nekhaya entliziyweni yeSixeko soBuhlobo beGolden, iCagayan de Oro City. Ibekwe eRamon Chavez St kwikona yeCorrales Avenue.
Iyunithi yesitudiyo efakwe ngokupheleleyo ngezinto eziyimfuneko kwi-Ayala Condominium esandula kuguqulwa. Ukufikeleleka kakhulu kunye nokuhamba umgama ukuya kumaziko amakhulu esixekweni afana ne-Ateneo de Cagayan, i-Divisoria, i-Ayala Mall, imarike yoluntu yaseCogon kunye nesibhedlele sephondo.
Iyunithi ijonge kwicala lentaba kwaye ijonge echibini (elisakhiwayo).
Kufuphi kunye nokuhamba umgama ukuya kwibhanti yaseyunivesithi, eAteneo de Cagayan
Kukho uluhlu lweendawo zokutyela ebumelwaneni.
Iivenkile ezinkulu ezifana ne-Ayala Mall kunye neGaisano ziibhloko ezimbalwa ukusuka kumgama wokuhamba.
Indawo yezemidlalo, imarike yoluntu kunye nezibhedlele zephondo nazo ziyafikeleleka kule ngingqi.
Umbuki zindwendwe ngu- Madel
Iindwendwe zam zingaqhakamshelana nam nangaliphi na ixesha ngayo nayiphi na imibuzo kunye noncedo ezinokulufuna.
1. Zonke iindwendwe kufuneka zibonise ikhadi lazo lokugonya i-Covid okanye i-Medical cert/negative swab test iziphumo ezithathwe kwiintsuku ezili-14 phambi kokungena.
2. Zonke iindwendwe ziyacelwa ukuba zinxibe iimaski zobuso.
1. Zonke iindwendwe ku…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cagayan de Oro